Covid-19 – Page4– Shwe Sar
ကိုဗစ် ကာ ကွယ်ဆေး ထိုးဖို့ စာရင်းေ ကာက်တာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ‌ဒေါက်တာ ခင်ခင်ကြီး ပြောပြီ
ကာကွယ်ဆေးအခြေအနေသည် လက်ရှိတွင် ယခင်ကအတိုင်း တရုတ်မှ ကာကွယ်ဆေး ၄ မျိုး ရုရှားမှ ကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုး အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုခွင့် ရထားသော်လည်း လူေ ထာ င်ေ ပါင်းများစွာတွင် စမ်းသပ်မှုကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည် […]
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို စာရင်းကောက်
By Shwe SarPosted on November 12, 2020
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများကို စတင် စာရင်းကောက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ကျန်းမာရေး နဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ဆေး ရုံများ အားလုံးကို နိုဝင်ဘာ (၁၁) ရက် နေ့စွဲ ဖြင့် အကြောင်းကြားစာ […]
ကာကွယ်ဆေး စဖြန့်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ မြန်မာပြည်ကို အစောဆုံး ရောက်လာနိုင်မယ့် အချိန်
အမေရိကန်မှာတော့ Pfizerr က ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖို့တောင် စီစဉ်နေပြီး နောက်လလောက်က စဖြန့်နိုင်မယ်လို့ ဆိုတယ်။ FDA approval ကိုဒီဇင်ဘာလကုန်လောက် ရနိုင်မယ်လို့မှန်း ကြ တယ်။ တော်ရုံကတိပေးလေ့ မရှိ၊ မီဒီယာတွေမှာ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး […]
အောင်ပွဲခံရာမှ ရန်ဖြစ်ကြပြီး အရေးပေါ် ရောက်လာသူ (၃) ဦးထံတွင် ကိုဗစ် ပိုးတွေ့
By Shwe SarPosted on November 11, 2020
“ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်တဖန်ဆေးရုံပြန်တက်ရနိုင်ပါသလား” အဖြေ ကတော့ Yes ပါ။ CDC မှ ၉/၁၁/၂၀၂၀ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော သုတေသနရလဒ်အဖြေအရ ကိုဗစ်ဖြစ် ပွားေ သာလူ ၁၁ ယောက်လျှင် ၁ ယောက်သည် နှစ်လအတွင်း […]
၀မ်းသာစရာသတင်းပါ!!! ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး စိတ်ချရတဲ့ ကမ္ဘာ့အသိ အမှတ်ပြု ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ‌ပေါ်လာပါပြီ
By Shwe SarPosted on November 10, 2020 November 10, 2020
ဖိုက်ဇာနှင့် ဘိုင်အိုအင်န်တက်ခ် (Pfizer နဲ့ BioNTech) တို့က ယင်းတို့ ၏ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးသည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိရောက် မှုရှိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး သိပ္ပံပညာနှ င့် လူ သားတို့အတွက် အထင်ကရနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ် လို့ ဂုဏ်ယူပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ဖိုက်ဇာရဲ့ […]
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး ပြောပြီ
By Shwe SarPosted on November 10, 2020
“ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတွက် ပထမဆုံး မှတ်တိုင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် Pfizer vaccine” Pfizer နှင့် BioNTech မှ ထုတ်လုပ်မည့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး သည် ကိုဗ စ်ြ ဖ စ်ခြင်းမှ ၉၀% နှင့်အထက် […]
ကိုဗစ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေ သိထားသင့် တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်ကို “ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး” ပြောပြီ
ကိုဗစ်ဟာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါလို့ သတ်မှတ်လိုက်တာကနေတွက်မယ် ဆိုရင် ၆ လရှိသွား ပါပြီ ဒီ ၆ လအတွင်း ဘာတွေထပ်သိလာရသလဲ ဆိုရင်… (၁) လူငယ်တွေဟာလဲ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက် ခံရနိုင်ပါတယ် ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါဘူး (၂) ရောဂါပိုးကပ်ငြိနေသော မျက်နှာပြင်များနှင့် […]
ကိုဗစ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းလို့ ဒီကနေ့ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပြီ ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူ နဲ့ ထွန်းကိုကို
Fighting အသင့် !အသင့် ! Fighting.အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျော်နဲ့ထွန်း အိမ်ပြန်ခွင့် ရပါပြီခင်ဗျား။ ကိုဗစ် ကူးဆက်မှုကြောင့် ရက်ပေါင်း (၁၈)ရက်တိတိ ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ကု သမှုခံ ခဲ့ရပါသည်။ ကုသပေးခဲ့ကြသော ဆရာဝန်၊ဆရာဝန်မများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ […]
ကျွန်တော့် ညီမလေး နဲ့ အမေက ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် . .ဆယ်ရက်ပဲ ကွာတယ်တဲ့ (ကိုဗစ် ဖြစ်ရပ်မှန် ဖြစ်ရပ် တခု)
မော်နီတာ စက်ပေါ်က အောက်စီဂျင်ရာခိုင်နှုန်းတွေ ၄၀-၅၀ ထိုးကျ သွားတာမျိုး အရင်က မမြင်ဘူးလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်မိတာ။ ဒီ ဓါတ်ပုံက သူ့အတွက် နောက်ဆုံးမှတ်တမ်း ဖြစ်မယ်လို့ ဘ ယ်ထ င်မိမလဲ။ ကိုယ် ကတော့ ပြန်တက်လာနိုးနဲ့ […]
မိမိ မှာ ကိုဗစ် ရှိ/မရှိ စစ်ချင်သူတွေ သိထား သင့်တဲ့ အကြောင်း အရာများ
ဒီနေ့က throat swab /Nasal swab (နှာခေါင်း တို့ပတ်/အာခေါင်တို့ပတ်) စစ်ချင်လို့ လာလာမေးတဲ့ သူတို့ အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် အခုရန်ကုန်တိုင်း တစ်တိုင်းလုံး အနေအထားနဲ့ symptoms ရှိရှိ မရှိရှိ လူတိုင်းကို စစ်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမရှိသေးပါဘူး […]